प्रतिष्ठित चर्च र गुम्बा युरोप मा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > प्रतिष्ठित चर्च र गुम्बा युरोप मा
पढ्ने समय:4मिनेट(Last Updated On: 24/03/2020)
युरोप संसारमा ऐतिहासिक महत्त्व छ जो आफ्नो वास्तुकला र ऐतिहासिक monasteries लागि अरूलाई कुराहरु प्रसिद्ध छ.
Noravank, भयोट्स डीजोरarmenia. Kgm प्रान्त (Armenia)
Noravank सबैभन्दा ऐतिहासिक र प्रतिष्ठित गुम्बा परिसर मा भयोट्स डीजोरarmenia. Kgm प्रान्त. चर्च छ संग घेरिएको ठिक रातो चट्टान, र नाटकीय दृश्य सबै भन्दा राम्रो को छ कारण अन्वेषण Armenia. ऐतिहासिक Noravank मा निर्माण भएको थियो को 13th शताब्दी र अर्थ "नयाँ गुम्बा" आर्मेनियाली. यो मठ भए एक सांस्कृतिक र शैक्षिक केन्द्र Armenia.
Tatev मठ, युनिकarmenia. Kgm प्रान्त (Armenia)
Tatev को एक छ jewels को Armenian वास्तुकला. यो गुम्बा निर्माण भएको थियो 9th-13th शताब्दीका यो थियो एक शैक्षिक केन्द्र र ऐतिहासिक महत्त्व लागि Armenian इतिहास. यो मठ को नाम छ एक रोचक मूल. There isanice and touchy लिजेन्ड बारेमा मास्टर कसले निर्माण को मठ. उहाँले उत्सुक थियो हेर्न आफ्नो उत्कृष्ट नमूना देखि आकाश र गर्न चाहने पखेटा छ सोधे परमेश्वरले उहाँलाई दिन पखेटा.
परमेश्वरले सुन्नुभयो आफ्नो प्रार्थना र उहाँलाई दिनुभयो मनमोहक पखेटा. शब्द "Tatev" को रूपमा अनुवाद गरिएको छ "दिने पखेटा". एक पटक तपाईं भ्रमण मठ तपाईं महसुस गर्नेछन् वास्तविक अर्थ. मठ चारै तिरबाट गहिरो घाटहरूले घेरेको छ. आर्मेनियाली चर्चले आर्मेनियाली धर्म र संस्कृतिमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको थियो. आर्मेनियाली क्षेत्रीय भ्रमण को कमिला प्रकार तपाईं पुरानो देश अन्वेषण गर्न मौका दिनेछु.
Sagrada परिवार, बार्सिलोना (स्पेन)
Sagrada परिवार सबैभन्दा भ्रमण प्रतिष्ठित चर्च मा स्पेन. निर्माण को स्मारक आधिकारिक सुरु मा 1882. आर्किटेक्ट फ्रान्सिस्को डे पाउला डेल विलर एक क्लासिक गोथिक शैलीमा डिजाइन गरिएको. तर, मा 1883 Antoni Gaudí परिवर्तन परियोजना र निर्माण आधुनिक वास्तुकला जो प्रसिद्ध छ संसारमा. निर्माण हुन सक्छ मा पूरा 2026, लागि को centenary Antoni Gaudí गरेको मृत्यु.
Architect थियो निर्माण गर्न योजना 12 टावर, समर्पित येशू ख्रीष्ट र चेलाहरूलाई, एक आमा को येशूले, चार सम्झना गर्न सुसमाचार प्रचारकहरूले. हाल, पूरा गरेको छ आठ टावर. भित्र चर्च, Gaudí डिजाइन स्तम्भहरू मा एक आकार स्लिम रूख सामान बनाउन जो वन शैली. माथि देखि को मन्दिर, तपाईं देख्न सक्छौं प्रभावशाली दृश्य शहर को.
Borgund Stave, Borgund (नर्वे)
Stave चर्च सबैभन्दा भयानक स्थलहरु मा नर्वे. यो निर्माण छ मा 1180 र समर्पित गर्न प्रेरित एन्ड्रयू. यस प्रकार को चर्च सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो प्रतिष्ठित स्मारक गर्न नर्वे वास्तुकला. केही आफ्नो कमजोर विशेषताहरू छन् extravagantly carved पोर्टल र पार र नक्काशियों को अजिङ्गर टाउको मा छाना. यो शैली फैलिएको थियो स्कैंडेनेविया मा प्रयोग र बेलायत मा पनि.
यो क्षेत्र संग घेरिएको धनी ऐतिहासिक सम्पदाको. Vindhellavegen छ नजिकै स्थित चर्च र सुझाव सुन्दर हिँडिरहेका सम्भाव्यतालाई. यो ऐतिहासिक सडक सम्मानित थियो "नर्वे सबैभन्दा सुन्दर बाटो" नर्वेजियन सार्वजनिक सडक मा प्रशासन 2014.
Duomo, मिलान (इटाली)
Duomo मा स्थित छ उत्तरी भाग को मिलान, यो ठूलो गिर्जाघर को एक छ. यो भन्दा भयानक र आकर्षक संरचना संसारमा. प्रभु र Archbishop को मिलान गर्न इच्छा निर्माण अद्वितीय गिर्जाघर बनाउन भनेर राष्ट्र महसुस गर्न परमेश्वरको महिमा र शहर जडान. को निर्माण को लागि Duomo संलग्न कन्स्ट्रक्टर, कालिगढहरु, र कालिगढहरु देखि युरोप भर. प्रत्येक कार्यकर्ता अनुभव र लगनशीलताको सिर्जना गर्न मदत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय गोथिक Duomo.
यो शैली भरेको छ उचाइ र नाटकीय सजावट. वरिपरि संरचना हो भन्दा 3400 मूर्तिहरू, 135 gargoyles, र 700 संगमरमर तथ्याङ्कले भनेर चिनारी Duomo. बाट उच्चतम शिखर, गर्न सक्छन् जहाँ सिढी चढ्नु वा लिन लिफ्ट, तपाईं देख्न हुनेछ, को सुन्दर Madonnia, सुनको प्रतिनिधित्व मुर्ति को मरियम र स्पष्ट दिन आनन्द उठाउन सक्छौं लुभावनी दृश्य मिलान.
Hallgrimskirkja, रेएकजाभिक (आइसल्याण्ड)
Hallgrimskirkja चर्च उच्चतम र सबै भन्दा ठूलो भवन रेएकजाभिक र देखिने शहर भर. चर्च छ 74,5 मीटर उच्च र पर्यटक प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ चर्च र आनन्द ठूलाठूला हेर्नुहोस्. भवन निर्माण सुरु 1945 र मा पूरा 1986. को आधुनिकतावादी चर्च थियो, त्यस्तै को बेसाल्ट लाभा बग्छ जब लाभा ठंडा मा रक.
यो पाइप टाढाको देखि चार पुस्तिका र एक पेडल. छन् 102 रैंक, 72 बन्द, र 5275 पाइप र छ 15 मीटर अग्लो, वजन भन्दा 25 टन. भवन शक्तिशाली छ र सक्षम भरने पवित्र र विशाल अन्तरिक्ष. निर्माण को अंग मा समाप्त भएको थियो 1992 र लागि प्रयोग गरिएको छ. एक किसिम को रेकर्डिङ.
तपाईं तयार गर्न केही देख्न प्रतिष्ठित चर्च र गुम्बा युरोप मा? तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् सबै यी गन्तव्यहरू सजिलै मदत संग एक ट्रेन सेव ! कुनै लुकेका अतिरिक्त शुल्क संग, तपाईं भयानक सवारी र राम्रो समय मा खर्च गर्न थप हुनेछ!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ficonic-churches-and-monasteries-in-europe%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#चर्चहरू #मठहरु europetravel यात्रा
म ट्राभल ब्लगर हुँ र ट्राभल एजेन्ट पनि हुँ. मलाई साहसिक यात्राको लागि र यस अद्भुत विश्वको अन्वेषण गर्न मनपर्छ - तपाईं यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ मलाई सम्पर्क गर्नुस्